I Kambôdia, na Fanjakan' i Kambôdia (amin' ny fiteny kimera: Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea, na Srok Khmer midika "firenen' ny Kimera") dia firenena any Azia atsimo atsinanana, manana isam-ponina 15 tapitrisa kambôjianina. Ny renivohiny dia Phnom Penh. I Kambôdia dia ny firenena nandimby ny Empira Kimera hindoista sy bodista nanjaka tao Indosina eo anelanelan'ny taonjato faha 10 sy ny taonjato faha 14. I Kambôdia dia mizara sisin-tany amin'i Tailandy any andrefana sy any avaratra andrefana, miaraka amin'ny Laôsy any avaratra-atsinanana ary miaraka amin' i Vietnamy any atsinanana sy any atsimo-atsinanana.
Ny olom-pirenenan' ilay firenena dia mitondra ny anarana hoe Kambôjianina na Kimera noho ny foko kimera maro an' isa ao Kambôdia. Ny ankabeazan' izy ireo dia manana finoana bodista teravada. Misy koa ny mozilmana ary amin' ny foko Cham ny ankabeazany, ary misy koa ny kristianina avy amin'ny foko monina any atsinanana.
I Kambôdia dia firenena any Azia Atsimo-Atsinanana, voadidin' i Tailandy, i Laosy ary i Vietnamy. Ny velarantaniny dia 181 035 km2, ary ny amorontsirany manan-kalava 443 km dia mivoaka eo amin'ny hoalan' i Tailandy. Manana tangorom-bohitra telo izy: ny tangorom-bohitry ny Elefanta, ny Kardamôma (Cardamomes) ary ny Dong.
Ny renivohiny, Phnom Peng, dia eo amin' ny renirano Mekong, eo amin' ny hefany. Ny loharanon' i Mekong dia any Tibeta ary miampita ny Kambodia alohan'ny Vietnamy Atsimo, eo izy no mirotsaka ao amin'ny Ranomasin' i Sina. Ny farihiny ngeza indrindra dia ny Farihy Tonle Sap, manana velarana miovaova arakaraky ny fotoana: 300 km² rehefa amin' ny andro maina, ary 10 000 km² rehefa amin' ny fotoan' ny orana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kambôdia&oldid=1040749"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:39 ity pejy ity.